ज्योतिको खुल्ला प्रश्नः बाइ द वे, केटा कुमार नरहनलाई के गर्छन् होला ?
Mon, May 25, 2020 at 8:18am
शुक्रबार, २० आषाढ २०७६,	आहाखबर	1.78K
ज्योति मीठो स्वरकी धनी गायिका पनि हुन् । उनले ‘जिम्मल बाउकी छोरी’ जस्ता चर्चित गीतबाट उहिल्यै आफ्नो परिचय स्थापित गरेकी हुन् । तर, ज्योति स्टन्टबाज पनि हुन् भनेर भनिरहन पर्दैन । उनी गीतबाट मात्र होइन, म्युजिक भिडियोमा पनि अनेक हर्कत गरेर चर्चामा आउँछिन् ।
कन्सर्टमा युवाहरू ज्योतिको गीत सुन्न होइन, फेसन हेर्न आउँछन् भन्ने आरोप छ । यो कुरामा त्यति सत्यता नहोला । तर, उनले दर्शकलाई तताउने गर्छिन् । अनेक हर्कत गरेर मनोरञ्जन दिन्छिन् ।
यस्तै धारणालाई प्रश्रय दिन ज्योतिले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘हाम्रो संस्कारमा बिहेअगाडि केटी कुमारी हुनुपर्छ, तर केटा कुमार नभए पनि हुन्छ । बाइ द वे, केटा कुमार नरहनलाई के गर्छन् होलान् ?... १८ वर्षकाले कमेन्ट गरुम् होइ ।’